Home Wararka Farmaajo oo codsaday in uu ka qaybgalo caleemasaarka Museveni, rajana ka qaba...
Farmaajo oo codsaday in uu ka qaybgalo caleemasaarka Museveni, rajana ka qaba la kulanka Uhuru
Madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday, Farmaajo ayaa waxa uu ka codsaday dalka Uganda in lagu maqtiqaado xafalada caleemasaarka Madaxweynaha dalka Uganda Museveni. Xafladaan oo lagu wado in ay dhadco bishan 12keeda ayaa lagu wadaa in Farmaajo iska xaadiriyo xafladaas iyada oo madaxda ka soo qayb galaysa shirkaas u arki doonaan in uu yahay madaxweyne aan sharciyad haysanin.
Ma jirto ceeb ka xun in uu Farmaajo ka qaybgalo xaflad uu kala kulmi doono waji gabax iyo liidasho dhaawacaysa sharafta iyo karaamada umaadda Soomaaliuyeed ee uu doonayo in uu xafladaas ku matalo.
Dhanka kale, Farmaajo aya waxa uu doonayaa in uu u muujiyo mucaaradka iyo shacabka Soomaliyeed in wali yahay madaxweynaha rasmiga ee Soomaaliya maadaama uu ka qayb-galayo xafaldo ay isugu imaanayaa madax kale oo Africaan ah.
Sida ay ilo muhim u sheegeen MOL , Farmaajo ayaa dhankiisa quud dareynaya in uu xafladaas kula kulmo si kadis ah Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo laga yaabo in uu xafladaas ka qayb galo. Laakiin waxaan shaki ku jirin in Uhuru ka baaqasan doono ka qaybgalka xaflada mar hadii hadii Farmaajo isku ku adkeeysyo in uu xafaladaas ka qayb galo, waxaana macquul ah in xafaladaas uu loo soo diro madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya Willian Ruto.